DOWNLOAD GAMEGAIN 4.3.5.2018 HO AN'NY MAIMAIM-POANA - PROGRAMME REVIEW - 2019
Rehefa miasa miaraka amin'ny latabatra, dia matetika no ilaina ny mampitambatra ny isa ho an'ny anarana manokana. Ity anarana ity dia ny anaran'ny mpifaninana, ny anaran'ny mpiasa, ny laharana, ny daty, sns. Matetika, ireo anarana ireo dia ny sasin-tenin-tsoratra, ary noho izany, raha te-hanombantombana ny totalin'ny singa tsirairay, dia ilaina ny hamintina ny ao anatin'ny selan'ny laharana manokana. Indraindray ny fampidirana ireo angon-drakitra voatokana ho an'ny tanjona hafa. Andeha hojerentsika ny fomba samihafa azo atao ao Excel.
Jereo koa: Ahoana no hanisana ny isa ao Excel
Famaritana sanda eo amin'ny tsipika
Amin'ny ankapobeny, ny soatoavina ao amin'ny tsipika iray amin'ny Excel dia azo fintina amin'ny fomba telo lehibe: mampiasa ny formulaire arithmetique, mampiasa fepetra sy auto-sum. Amin'ity tranga ity dia azo zaraina amin'ny safidy maromaro kokoa ireo fomba ireo.
Fomba 1: famaritana arithmetika
Voalohany indrindra, andeha hojerentsika ny fomba ampiasaina, amin'ny fampiasana rafitra arithmetika, afaka manombana ny isa amin'ny tsipika. Andeha hojerentsika ny fomba fiasan'io fomba io amin'ny ohatra iray manokana.
Manana latabatra iray mampiseho ny fidiram-bolam-panjakana dimy amin'ny daty. Ny anaran'ny famandrihana dia anarana anarana sy daty misy anarana. Ilaintsika ny manombatombana ny totalin'ny vola miditra voalohany amin'ny vola mandritra ny fe-potoana iray manontolo. Mba hanaovana izany, dia mila mameno ny cellules amin'ny tsipika isika, izay manondro io fivoahana io.
Mifidiana ny sela izay hanehoana ny valiny farany amin'ny fanisana ny totaliny. Nanisy marika tany izahay "=". Isika dia mamerina midina-tsindrio eo amin'ny sela voalohany amin'ity laharana ity, izay misy ny isa marika. Araka ny hitanao, ny adiresy dia aseho avy hatrany ao amin'ilay singa mba hampisehoana ilay vola. Nametraka famantarana izahay "+". Dia tsindrio eo amin'ny sela manaraka ao amin'ny laharana. Amin'izany fomba izany dia mampiova ny famantarana isika "+" miaraka amin'ireo adiresin'ny sela ao amin'ny laharana izay an'ny fivarotana voalohany.
Vokatr'izany, amin'ny tranga manokana ananantsika, dia mahazo izao manaraka izao:
Mazava ho azy, amin'ny fampiasana latabatra hafa, ny endrika ivelany dia tsy mitovy.
Maka ny totalin'ny vola miditra ho an'ny tsindry voalohany amin'ny tsindrio Ampidiro amin'ny klavier. Ny valiny dia aseho ao amin'ny efi-tranonkala izay misy ny rohy.
Araka ny hitanao dia tsotra sy mahaliana ity fomba fitsaboana ity, saingy misy ny tsy fahampiana lehibe. Amin'ny fampiharana azy, mila mandany fotoana betsaka ianao raha ampitahaina amin'ireo safidy izay heverintsika etsy ambany. Ary raha misy tsanganana marobe eo amin'ny latabatra, dia hitombo bebe kokoa ny saran'ny fotoana.
Fomba 2: Auto Sum
Ny fomba haingana kokoa hampidirana ny angona amin'ny tsipika dia ny fampiasana auto-sum.
Fidio ireo sela rehetra amin'ny sanda nomeran'ny laharana voalohany. Ny fanatanterahana dia atao amin'ny fihazonana ny bokotra ankavia. Mandeha eo amin'ny tabilao "Home"tsindrio ny sary "AutoSum"izay hita eo amin'ny kasety eo amin'ny sakana amin'ny fitaovana "Fanovana".
Safidy iray hafa hiantsoana ny volan'ny auto dia ny miditra amin'ny takelaka. "Formula". Misy kitapo fitaovana "Function Library" eo amin'ny tsindry bokotra eo amin'ilay bokotra "AutoSum".
Raha tsy te-hivezivezy amin'ny tablette ianao, rehefa avy mifidy ny tsipika, dia azonao atao fotsiny ny mametraka ny fonosana Alt + =.
Na inona na inona fanapahan-kevitra nofaritana etsy ambony nofidiana ianao, dia hisy isa iray hipoitra eo ankavanan'ny faritra voafaritra. Izany dia ny hamaroan'ny soatoavina string.
Araka ny hitanao, ity fomba ity dia ahafahanao manisa ny isa amin'ny andalana faran'izay haingana kokoa noho ny dikan-teny teo aloha. Saingy manana hadisoana ihany koa izy. Izy io dia mifototra amin'ny hoe ny volabe dia hampiseho ny zon'ny zana-tsipika voafaritra, fa tsy eo amin'ny toerana izay tian'ny mpampiasa.
Fomba 3: singa SUM
Raha te handresy ny tsy fahombiazan'ireo fomba roa voalaza etsy ambony ireo, dia ny safidy ampiasana ny fango Excel natsangana antsoina vola.
mpandraharaha vola dia anisan'ny vondron'asa matematika Excel. Ny asany dia ny mametraka tarehimarika. Ny fehezan-dalàna amin'ity asa ity dia toy izao manaraka izao:
= SUM (number1; number2; ...)
Araka ny hitanao dia ny isa na ny adiresin'ny sela izay misy azy ireo ny adihevitr'io mpandraharaha io. Ny isa dia afaka hatramin'ny 255.
Andeha hojerentsika ny fomba ahafahanao mamintina ireo singa mifandimby mampiasa ity mpandraharaha ity amin'ny alalan'ny ohatra nasehonay.
Safidio ny sela tsy misy pentina eo amin'ny taratasy, izay heverinay fa hampiseho ny valin'ny fanisana. Raha irinao, azonao atao ny misafidy izany amin'ny taratasy hafa. Saingy zara raha izany, satria amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia mora kokoa amin'ny fametrahana tranonkala mahazatra mba hampisehoana ny totalim-peo amin'ny andalana mitovy amin'ny angona novaina. Rehefa vita ny fifantenana, kitiho ny icon "Fepetra mampidira" eo ankavanan'ny barrel formula.
Mihazakazaka ny fitaovana mitondra ny anarana Function Wizard. Mandeha ao anatin'io sokajy io isika "Matematika" ary avy amin'ny lisitry ny mpandraharaha misokatra, mifidiana ny anarana "Vola". Dia kitiho ny bokotra. "OK" amin'ny faran'ny varavarankely Asa Mastsy.
Manala ny fikandrana fanamafisam-peo vola. Azo amina varavarankely miisa 255 ny sahan-tsavily 255, fa hamaha ny olantsika ihany fa mila sehatra iray ihany isika - "Laharana 1". Ao anatin'izany dia mila miditra ny koordinan'ny tsipika ianao, ny soatoavina izay tokony ampiana. Mba hanaovana izany, dia mametraka ny cursor amin'ny sehatra voafaritra, ary avy eo, raha tapihina ny bokotra ankavia, dia fidio ny isa manontolo amin'ny andalana ilaintsika amin'ny cursor. Araka ny hitanao, ny adiresy amin'io sehatra io dia hiseho avy hatrany eo amin'ny sehatry ny fikandrana. Dia kitiho ny bokotra. "OK".
Rehefa avy nanao ilay hetsika natao, dia hiseho eo amin'ny sela nofidinay voalohany amin'ny ambaratonga voalohany ny fametrahana ny soatoavina eo amin'ilay laharana.
Araka ny hitanao, ity fomba fitsaboana ity dia azo henoina ary mora vidy. Marina fa tsy ho an'ny mpampiasa rehetra izany, fa mahaliana. Noho izany, ireo izay tsy mahafantatra ny fisiany avy amin'ny loharano isan-karazany dia mahalana no mahita azy ao amin'ny interface Excel.
Lesona: Mpitarika ny asa ao amin'ny Excel
Saingy inona no tokony hatao raha tsy mila ampifandraisina ianao fa tsy misy andalana roa, fa tenenina 10, 100 na 1000? Tena ilaina ve ny andalana tsirairay hampihatra ireo dingana etsy ambony ireo? Raha tody, tsy voatery. Mba hanaovana izany, dia andramo tsotra izao ny formula d'summation ho an'ireo sela hafa izay kasainao hampisehoana ny habetsaky ny andalana sisa. Azo atao izany amin'ny fampiasana fitaovana iray mitondra ny anaran'ny fanamarihana.
Manao ny fanampiana ireo soatoavina ao amin'ny laharana voalohan'ny latabatra amin'ny fomba rehetra voalaza tetsy aloha. Apetraho eo amin'ny zoro ambany faran'ny efi-trano ny cursor izay aseho ny vokatry ny fampiharana na ny fampiharana. Amin'ity tranga ity dia tokony hanova ny endriny ny cursor ary hovana ho marika fameno, izay toy ny lakroa kely. Avy eo dia atsangantsika ny bokotra ankavia ary asio ny cursor, mifanaraka amin'ny cellules amin'ny anaran'ny tsipika.
Araka ny hitanao, feno ny angona ny sela rehetra. Io no isa amin'ny sanda mitokana ao anaty andalana. Ity vokatra ity dia nahazo satria satria, raha alahatra, ny rohy rehetra ao Excel dia havana, tsy tanteraka, ary manova ny fandrindrana azy rehefa maka tahaka.
Lesona: Ahoana no fomba fanaovana automatique amin'ny Excel
Araka ny hitanao, ao amin'ny Excel dia misy làlana telo lehibe ahafahana manombatombana ny isa amin'ny sanda eo amin'ny tsipika: arithmetic formula, auto sum and the function SUM. Ny tsirairay amin'ireo safidy ireo dia manana tombony sy tsy fitoviana. Ny fomba tsotra indrindra dia ny fampiasana rofia, ny safidy haingana dia auto sum, ary ny ankamaroan'ny universal dia mampiasa ny mpilalao SUM. Ankoatr'izay, amin'ny fampiasana ny mari-pototra, dia afaka manatanteraka famintinana betsaka ny soatoavina amin'ny andalana, vita amin'ny iray amin'ireo fomba telo izay voalaza etsy ambony.